>> Man's real life is happy, chiefly because he is ever expecting that it soon will be so.
>> Sadness diminishes or hindersaman's power of action.
ဒါလေးတွေက ကျနော် ဟိုတုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိန်းလွင် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ "မြော်မြင်စဉ်းစား ပညာစကား"ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲက ကျနော် သဘောကျတဲ့ စာမျက်နာတွေထဲက တစ်ချို့ပါ အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကပဲ နောက်ထပ် ကျနော်ပေးချင်တာလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ အချိန်ရရင် ထပ်တင်ပေးဦးမယ်။ ဒီစာလေးတွေမှာ သရုပ်ဖေါ်ပုံလေးတွေ ဆွဲပေးတဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်၊ ဆရာ စောမင်းဝေ၊ ဆရာ ကိုဆန်းတို့ကိုလည်း ဆရာဥဲီးသိန်းလွင်နဲ့ ထပ်တူ ကျေးဇူးတင်ရင်း လေးစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါလေးတွေကို အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် ပုံပေါင်း ၆ဝ လောက်နဲ့ ပညာရှိတွေရဲ့ စကားလေးတွေဖေါ်ပြဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ အလုပ်အားတဲ့အခါ ဆက်တင်ပေးပါဦးမယ်။
knowledge Lovingly message
Labels: knowledge Lovingly message